Zvese Zvese Mawiricheya - Manual Wheelchair | Karman Healthcare
Iri gwaro rekukubatsira kuti unzwisise zvese nezve mavhiripu. Iri gwaro rinosanganisira kutarisa kupfupi munhoroondo ye mavhiripu, iyo tekinoroji yakagadziridzwa sei, ndeapi mhando yemakambani anobatanidzwa, uye zvese nezvemhando dze mavhiripu Kunze Uko.
Zviri nani Zvishandiso
Kutakura kana Kufamba hwiricheya
Yekutanga kurangarira kwe hwiricheya kugadzirwa kuri muma1590s. Yakanga iri nguva refu yapfuura, apo a hwiricheya yakagadzirirwa Mambo Phillip II weSpain uye yakanzi "chigaro chisina kunaka", zvichireva munhu akaremara kushandisa ari hwiricheya.
wokutanga hwiricheya yakamboitwa inoita kunge yanga iri chokufambisa wiricheya; Ini ndinotaura izvi nekuti ndiri kufungidzira kuti Mambo Phillip haana kuzvisimbisa kuti afambe achitenderera imba yake kana kunze kwayo. Ichi chaive chiitiko chekutanga kumboitika chemuchengeti werudzi rwemunhu, kana shamwari yaizosunda mambo kutenderedza pasina chikonzero chekuti aendese chishandiso ari ega.
Inotevera nguva a hwiricheya yakazivikanwa munhoroondo yaive muna 1655. Akaremara mumwe munhu anonzi Stephen Farfler akagadzira uye akavaka yekutanga kuzvishingisa hwiricheya. Pakarepo chinondinakira ichokwadi chekuti vese mavhiripu zvataurwa pamusoro zvakabuda pakudikanwa, asi mhando ye hwiricheya zvinosanganisirwa zvaienderana necustomer class munhu wacho.
Tine mambo ari chikamu chemhuri yehumambo; zvake hwiricheya ndiwo chokufambisa wiricheya nekuti varanda vake vanomusundidzira kwakadaro saka haafanire kuzvimisikidza iye. Mhosva yechipiri ndeyemugadziri wewachi aive chikamu chevapakati zvakanyanya kupfuura zvingangodaro, yake hwiricheya yaive yekuzvifambisa yega hwiricheya, uye akange asina vashandi vekumusundidzira achitenderera, saka aifanira kuvaka chigaro chaizvifambisa.
Muna 1783, murume anonzi John Dawson wekuSpain akagadzira yekutanga hwiricheya inoshandiswa pakushambidza rubatsiro. Rudzi urwu rwe hwiricheya yaive nyowani yenguva yayo uye ikave imwe yeanonyanya kuzivikanwa mavhiripu yenguva iyoyo. Iyo magadzirirwo ewiricheya yaive yakapusa, maviri makuru mavhiri uye diki diki.
Isu tinounza kumberi kuma1900 uye hongu parizvino kwave nekuwanda kwakawanda uye kugadzirisa kwakaitwa kune iyo hwiricheya parizvino. Yekutanga vhiri remberi rekumberi uye diki rekumberi dhizaini raive ratosimbiswa nema1900. Mavhiri erabha emaburi aishandiswawo kutevedzera mabhasikoro. Chinhu chinobvumidza mushandisi kuzvisimudzira pasina kubata mavhiri, chakagadzwawo parizvino, kusunda marimu aive akaenzana nema1900.
Kutanga muma1900s iyo wheelchair yakajairwa yakauya yakataura mavhiri akafanana nebhasikoro, uye makore mashoma gare gare iro rekutanga simba hwiricheya yakagadzirirwa. 1932 inoratidza rimwe zuva rakakura munhoroondo ye mavhiripu. Harry Jennings akagadzira yekutanga tubular hwiricheya izvo zvakafanana nezuva ranhasi mavhiripu fanana. Ivo pakupedzisira vaka "kuumbwa" kune imwe dhizaini muyero unorarama nanhasi.